အဆင့်တက်ပွဲ ရာသီ 4
ရာသီသစ် 12/08 17:00 SGT တွင်စတင်မည်
“4v4 ရာသီသစ်လာပါပြီ! အဆင့် Gold III သို့အထက် အားလုံးသည် အထူးသီးသန့်ပစ္စည်း -The Golden P90! ရရှိမည်”
ရာသီ4အတွက်, ကစားပွဲအားလုံးရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်လာစေရန် ပြိုင်ပွဲရှာဖွေမှုကို
အထူးပြုပြင်နေပါသည်. ဤရာသီအသစ်တွင်, ကြိုတင်ဖွဲ့စည်းထားသောအသင်း မှတစ်သင်းနှင့်တစ်သင်းဆန့်ကျင်ကစားကြမည်. ထို့အပြင်, အသင်းနှစ်သင်းလူပြည့်မှ
ပွဲစရန်သေချာတိုင်းတာမှုကိုလည်းဖြည့်စွက်ထားသည်. ဤပြုပြင်မှုများသည် 4v4 ပြိုင်ပွဲများအတွက် ပိုမိုပျော်စရာနှင့် စိတ်ထက်သန်မှုပေးစွမ်းနိုင်မည်”
ကစားသူသည် အဆင့်တက်ရန်အတွက် အဆင့်တက်ဒိုင်းအပိုရရှိမည်.
လက်နက်အသစ် - Vector Akimbo
“လက်နက်သစ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း- Vector Akimbo. ဒီဗက်တာဟာ Free Fire မှာပထမဆုံး ဒွန်တွဲသုံး Akimbo လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်, အကွာအဝေးတိုပေမဲ့ ,ဖွတ်ညက်စေနိုင်တဲ့ ထိခိုက်မှုရှိပါတယ်. အသုံးပြုကြည့်ပါ ပြီးတော့ နောင်လာမဲ့အချိန်မှာလဲ ဘယ်လို akimbo လက်နက်မျိုးတွေ့ချင်လဲပြောပြခဲ့နော်!”
တပ်ဆင်စရာပစ္စည်း: ပြောင်းသေနတ်, ဒင်
“Akimbo” - ကစားသူသည် ဗက်တာတစ်ခုစီကို လက်တွင်ကိုင်ဆောင်နိုင်သည်.
“M82B လက်ရှိမြေပုံမှာ ရှာဖွေရတာလွယ်ကူသည်, အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းအချိန်. သေနတ်ကျနှုန်းအနည်းငယ် လျှော့ချပါမယ် ထိုမှသာကစားသမားများသည် သေနတ်ရှာရန်ပိုမိုအားထုတ်လာလိမ့်မည်.”
မြေပုံအားလုံးတွင် M82B ကျနှုန်းလျှော့ချမည်
ပုံမှန်ကစားပွဲနှင့် 4v4 တွင်ရနိုင်မည်
“M4 သည်ပျှမ်းမျှအထက် ကျည်ကန်နှုန်းနဲ့ ကျည်ထွက်နှုန်းနှေးသောကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါသည်. ဒါ့ကြောင့် M4 ကိုစွမ်းအားနဲ့အကွာအဝေးအနည်းငယ်ပြင်ပေးမှာမို့ နောက်ဆိုအသုံးပြုဖို့စိတ်ထက်သန်စေမှာပါ. ပြုပြင်ပြီးရင်တော့, အလယ်အလတ်ကနေ အကွာအဝေးရှည်ထိ M4ကပိုပြီးတည်ငြိမ်လာမယ် ပိုပြီးစိတ်ချရမယ်.”
“ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် ဘက်ဖ်ပြုပြင်ပြီးတာတောင်, SMGs ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ P90ကတော်တော်လေးလိုနေသေးတယ်. အဲ့ကြောင့် P90 ကိုသူရဲ့ကျည်ကပ်အကွက်တိုးချဲ့ခြင်းအစား ထိခိုက်မှုအားထုတ်ပေးခြင်းပါးပါးလေးတိုးထားပါတယ်. ဒီပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆို, P90 မှာအပိုထပ်ဆောင်းခံစားရမှာပါ သူ့မှာရှိတဲ့ကျည်ကပ်ကန့် 50 နဲ့အတူ”
“အဆင့်မြင့်ပူးတွဲမှုကိုထုတ်ဝေပြီးတည်းက, လက်နက်တစ်ခုချင်းစီ၏စွမ်းဆောင်မှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးဖြစ်သည်. အဆင့်မြင့်ပူးတွဲလက်နက်များဟာ စွမ်းဆောင်ရည်သင့်တော်
သော်လည်းစိတ်မချရပါဘူး ပူးတွဲအရာတွေကရှာဖွေရတာဗျာများရလို့ပါ. ဒါ့ကြောင့်အဆင့်မြင့်လက်နက်နဲ့
အစားထိုးထားပြီး ကစားသမားတွေကဒီရှားပါးကျတဲ့ပစ္စည်းကို ပူးတွဲပစ္စည်းရှာစရာမလိုဘဲ အသုံးပြုရနိုင်မှာပါ.”
“ငွေကြေးစနစ်အသစ်ထည့်သွင်း - လေ့ကျင့်ကွင်းမှာ မီနီဂိမ်းနဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာတက်ကြွတဲ့ ကစားသမား
တွေအတွက် ဘာမူဒါ shell ပါ။ မီးရှူးမီးပန်းများနှင့်လှဲလှယ်ရာတွင်အသုံးပြုပါ အသင်းသားများနဲ့ ပျော်ပွဲဆင်နွှဲ
ငွေကြေးစနစ်အသစ် - ဘာမူဒါ Shells.
အလင်းအင်အား - အပြင်ဘက်လက်ရှိချိန်မူတည်ပြီး လေ့ကျင့်ကွင်းအလင်းကိုပြုပြင်ထားသည်
အလျင် နှင့် စက်ကိရိယာပြုပြင်မှု
“လျှပ်စစ် စီးဘုတ်သည်ပြိုင်ဘက်များတုန့်ပြန့်ရန်လတ်တလောအနည်းငယ်မိုလ်ဘိုင်းဆန်နေသည်. သူ့ရဲ့အလျင်ကိုလျှော့ချပြီး အသုံးပြုကြာချိန်ထည့်သွင်းမည် ထိုမှသာစီးဘုတ်၏အစွမ်း
“Fire Pass ကိုအပ်ဒိတ်မလုပ်တာအချိန်တစ်ခုတောင်ရှိပြီ.ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့,မျက်နှာပြင်ကို အသစ်ပြောင်းထားပေးပါတယ် ဒါမှကစားသမားတွေ မစ်ရှင်ကိုရာသီတစ်ခုစီတိုင်းကောင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ. လာမဲ့ရာသီမှာ, မစ်ရှင်စက်ကိရိယာကိုပြုပြင်ထားပါတယ် ဒါမှကစားသူတွေ ချောမွေ့စွာ Fire Pass ကို level မြင့်နိုင်မှာပါ. ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များအတွက်စောင့်ပေးပါ.”
Fire Pass မစ်ရှင်းအတွက်ခေတ်မှီတဲ့ မျက်နှာပြင်.
Veteran နဲ့ Elite မစ်ရှင်တွေကို အပတ်စဉ်မစ်ရှင်တွေနဲ့အစားထိုးမည်.
“အခုဆိုရင်မတူညီသောဂိမ်းစနစ်တွေအတွက်ဂိမ်းတွင်း HUD ကိုနှစ်စုံအထိသိမ်းလို့ရပါပြီ. သင်တောင်းဆိုပါ၊ ကျွနုပ်တို့ပို့ပေးပါမည်.”
ဝင်ပေါက်ကို အဓိကလောဘီမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်
“ဒီတစ်ခေါက်မှာ အဆင့်တက်စနစ်အတွက် အထူးစာမျက်နှာထည့်ထားပါတယ် .ဒီခေတ်မှီတဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ, Battle Royale နှင့် 4v4 အဆင့်တက်စနစ်အတွက် သင်၏ဆုများနှင့်ရာသီဆုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်. ဦးဆောင်ဘုတ်၏ထိပ်ဆုံးကိုမည်သူဦးဆောင်နေသည်ကိုလည်းသင်တွေ့မြင်နိုင်မည်!”
“စွယ်စုံပြဇယားကို လှည့်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်. ဒါမှသာစွယ်စုံရ HUDကိုမျက်နှာပြင်
ကစားသူတွေခုဆိုရင် ဂိမ်းတွင်းစွယ်စုံပြဇယား HUDကိုလှည့်ပြီးသုံးနိုင်ပြီ.
Free Fire မိတ္ဖက် (Partner)
Free Fire မိတ်ဖက် ပရိုဂရမ်မှာရရှိနိုင်ပါပြီ
“အခုဆိုသင် Free Fire မိတ်ဖက်နှင့် သူတို့ဂိမ်းတွင်းအထူးဆုတံဆိပ်အားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်
ပါပြီ။ ရှာဖွေထုတ်ပြီး သင်နှစ်သက်ရာအမူအရာကိုပြပါ။!”
Free Fire မိတ်ဖက်တွေဟာခုဆိုရင် အထူးဂိမ်းတွင်းဆုတံဆိပ်တွေကိုလက်ခံရရှိတော့မှာပါ.
Battle Royale စနစ်အတွက် သေတဲ့အချိန်မြင်ကွင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
Free Fire World Series (FFWS) 2022 Sentosa အရည်ချင်းပြည့်မီအသင်းများ Free Fire World Series (FFWS) 2022 Sentosa: Play-In အသင်း 10 သင်းသည် မေလ 14 ဖိုင်နယ်တွင်4နေရာအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် 2022-05-09
အပ်ဒိတ်အသစ်! ကော်ဘရာတိုက်ပွဲ (Project Cobra) အပ်ဒိတ်အသစ်! ကော်ဘရာတိုက်ပွဲ (Project Cobra) 2021-02-03